मास्क लगाउने नेपाली स्टाइलः जोगाउला त संक्रमणबाट ? | Ratopati
मास्क लगाउने नेपाली स्टाइलः जोगाउला त संक्रमणबाट ?
personसुवास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeअसार ४, २०७७ chat_bubble_outline0
साढे दुई महिना लामो ‘लकडाउन’ पछि सरकारले बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएको छ । बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउनुको अर्थ नेपालमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणको जोखिम अन्त्य भयो भन्ने होइन । जनस्वास्थ्यविद्हरु बन्दाबन्दी खुकुलो भएको अवस्थामा जनता झनै सजग हुनुपर्ने र सुरक्षाका उपायहरु गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप बनिनसकेको अवस्थामा यसको संक्रमणबाट बच्ने उपाय भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र सरसफाइमा ध्यान दिने नै हो । विज्ञहरु हामीले मास्क लगाउने हो भने संक्रमणको सम्भावना निकै कम हुने बताउँछन् । सरकारले पनि भीडभाड भएको स्थानमा जाँदा मास्क लगाउन सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
मास्क लगाउने भनेको हाम्रो नाक र मुखबाट भाइरस शरीरमा प्रवेश नगरोस् भनेर हो । त्यस्तै कोही संक्रमित भएका छन् भने उनीहरुले हाच्छ्यूँ गर्दा वा खोक्दा भाइरसबाट अरु संक्रमित नहोउन् भनेर हो । त्यसैले मास्क लगाउँदा हाम्रो नाक र मुख राम्रोसँग ढाकिनुपर्छ ।
तर, हामी नेपालीको भने मास्क लगाउने ‘स्टाइल’ नै फरक छ । हामी मास्क त लगाउँछौ, तर नाक र मुख छोप्न होइन, चिउँडो छोप्नका लागि । कसै कसैले मास्कले मुख छोपे भने नाक छोपेका हुँदैनन् । कतिपयले त मास्कसमेत नलगाइ भीडभाड भएको क्षेत्रमा हिँडिरहेका हुन्छन् । मास्क लगाएका व्यक्ति कसैसँग बोल्नुपरे मास्कलाई हटाएर मात्र बोल्छन् ।
यसरी न त संक्रमित हुनबाट बचिन्छ, न त संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ । यसरी नै हामी बेपर्वाह हुने हो भने स्थिति भयावह बनेर फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । बेलैमा ध्यान पुर्याउने हो कि ?